The Empty Cross – အရိုးမား မြန်မာခရစ်ယာန်စာပေ
29Mar 2013 10 Apr 2019
ကျွန်တော်တို့ Dear Abby ပြောသော ရင်နင့်ဖွယ်ကောင်းသည့် ဇတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ကြားဖူးချင် ကြားဖူးကြမည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝသော မိသားစုမှ သားအဖနှစ်ယောက် အကြောင်းဖြစ်သည်။ သူတို့အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အစဉ်အလာ ကဲ့သို့ ကျင့်သုံးသော ဓလေ့ တစ်ခုရှိသည်။ သားသမီး တစ်ယောက်ယောက် ဘွဲ့ယူလျှင် မိဘများက ကားအသစ်တစ်စီး ဝယ်ပေးခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ပြုလေ့ ရှိသည်။ မကြာခင် ဘွဲ့ယူမည့် ဘီလ် နှင့် ဖခင်သည် သားအတွက် စိတ်ကြိုက်ကား တစ်စီး ဝယ်ရန် ၂ လ ၃ လ ခန့် တိုင်အောင် အချိန်ပေးပြီး ကားရောင်းသည့်နေရာ များစွာကို သွားကြသည်။ နောက်ဆုံး ဘွဲ့မယူခင် တစ်ပတ်ခန့် အလိုတွင် ဘီလ် ကြိုက်သည့် ကားကို ရှာတွေ့ကြသည်။ ဘွဲ့ယူသည့် ညတွင် ဖခင်ဖြစ်သူသည် ကားသစ်၏ သော့ကို ကျမ်းစာအုပ်ထဲတွင် ထဲ့ထားပြီး သေချာထုပ်ပိုးကာ ဘီလ် ကို ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင် အနေနှင့် ပေးသည်။ ကားသော့ကိုသာ မျှော်လင့်သော ဘီလ် သည် ကျမ်းစာအုပ်ကို မြင်သောအခါ စိတ်ဆိုးပြီး တချက်မျှ ဖွင့်မကြည့်ဘဲ ကျမ်းစာအုပ်ကို အပြင်သို့ လွင့်ပစ် လိုက်ကာ အိမ်မှ ထွက်ပြေးသည်။ ဖခင်ပေးသော ကတိသည် ကားတစ်စီး မဟုတ်ပါလား။
ထိုနေ့ညသည် သားအဖ နှစ်ယောက် ဘဝတာတစ်ခုလုံးအတွက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နောက်ဆုံး မြင်တွေ့ရသော ညနေခင်းဖြစ်သည်။ မမျှော်လင့်ဘဲ ဖခင်ကြီး သေဆုံးသည့် သတင်းကြောင့် ဘီလ် တစ်ယောက် အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့သည်။ ဖခင်နှင့် အတူရှာဖွေခဲ့သော စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း ကြီးစွာနှင့် မျှော်လင့်ခဲ့သော ကားကို ဖခင်ကြီးက ဝယ်မပေးဘဲ ကျမ်းစာ အုပ်ကိုသာ ပေးသောကြောင့် စိတ်နာပြီး အိမ်ကို တစ်ရက်မျှ အဆက်အသွယ် မပြုဘဲ နေရာမှ အိမ်သို့ ပြန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တညနေ… မမျှော်လင့်ဘဲ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော မိမိနှင့် ဖခင်၏ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး အဖြစ်အပျက်များကို စဉ်းစားရင်း၊ အိမ် အပြင်ဖက်တွင် တစ်ယောက်တည်း ရင်မောတွေဝေနေစဉ် ဖခင်ကြီး နောက်ဆုံး ပေးခဲ့သည့် အသေအချာ ထုပ်ထားသော ကျမ်းစာအုပ်ကို မြင်သည်။ ညစ်ထေး ပေရေနေသော ဖခင်၏ နောက်ဆုံး လက်ဆောင်ကို ကောက်ယူပြီး ဖုန်များကို လက်ဖြင့် ခါလိုက်သည်။ အထဲကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာ သူမျှော်လင့်ခဲ့ရသော၊ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ခံစားခဲ့ရသော ကား၏သော့ နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု စာရွက်စာတမ်းများကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ဤ ဇတ်လမ်းကို ကြားမိတိုင်း စိတ်မကောင်း၊ သားအတွက် အစွမ်းကုန် ပေးဆပ်ခဲ့ရှာသော ဖခင်ကြီးကို သနားမိသည်။ ဒီနေ့ လူများစွာသည် ဒီ ဇတ်လမ်းထဲက ဘီလ် လိုဘဲ၊ ဘုရားသခင်ကို အထင်လွဲမှားပြီး ရင်ခွင်တော်မှ အဝေးကို ထွက်ပြေးနေကြသည်။ လူသားများဟာ ဘုရားသခင်ပေးတဲ့
အကောင်းဆုံးသော လက်ဆောင်ကို မတွေ့မမြင်ဘဲ၊ အသေအချာမသိဘဲ လွယ်လင့်တကူ လွင့်ပစ်လိုက်တတ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံးသော ကတိတော်များကို အလွယ်တကူဘဲ လစ်လျူရှုထားတတ်ကြသည်၊ ဘေးချိတ်ထားတတ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ ကတိတော်များထက် လောကကြီးကပေးတဲ့ ကတိတွေကို ပိုပြီးယုံကြည်တတ်ကြသည်။ စည်းပွါးရေးသမားတွေပေးတဲ့ ကတိတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေပေးတဲ့ ကတိတွေ၊ ပညာရေးစနစ် ကပေးတဲ့ကတိ၊ ဆရာဝန်တွေ ပေးတဲ့ကတိ …စတဲ့ ကတိတွေ ပေါင်းများစွာကို သာ၍ ယုံကြည်နေကြသည်။ လောက အရာတွေကပေးတဲ့ ကတိတွေဟာ မက်မောစရာ ကောင်းတတ်ကြပါသည်။ သို့သော် တကယ့်တကယ်တော့ ဘာမှမရှိတဲ့ ဘလာနတ္တိ (Empty) အရာများသာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရှင်ပြန်ထမြောက်ချိန် (Easter) အချိန်မှာ ဘလာနတ္တိ ဖြစ်နေတဲ့ ကားတိုင် (Empty Cross)၊ ဘလာနတ္တိဖြစ်နေတဲ့ သချိုင်း (Empty tomb) ၊ ပိုင်ရှင်မဲ့ အလောင်းတော်ကို ပတ်တဲ့ အဝတ်စ (Empty burial clothes) တွေ ဟာ လူသားအားလုံးအတွက် ခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့ ကတိတော်တွေ၊ ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကတိတွေကို သတိရစေဖို့၊ ခိုင်မာစေဖို့ အတွက် သက်သေများဖြစ်သည်။
ဘလာနတ္တိဖြစ်နေတဲ့ ကားတိုင်တော်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ရရှိတဲ့ ကတိတော်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ လောကသား အားလုံးရဲ့ အပြစ်တွေကို သခင်ယေရှုက ကားတိုင်ပေါ်မှာ ပေးဆပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် လူသားအားလုံးဟာ အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်။ အပြစ်ဆိုတာ ဘာမှန်း မသိတတ်သေးတဲ့အရွယ် မွေးစကလေးတွေကအစ အပြစ်ရှိသူများ ဖြစ်သည်။ ဆာလံ ၅၁း၅ တွင်
“အကျွန်ုပ်သည် မွေးစကပင် အပြစ်ပါလျက်ရှိပါ၏၊၊ အမိဝမ်းထဲမှာ ပဋိသန္ဓေ စွဲယူစဉ်ပင် အပြစ်စွဲပါ၏၊၊”
ဟု ဖော်ပြထားသည်။ လူသားအားလုံး၏ မိဘ များဖြစ်သော အာဒံ နှင့် ဧ၀ သည် ဘုရားသခင် တားမြစ်ထားသော အရာကို ကျူးလွန်မိရာမှ ဘုရားသခင်က အာဒံနှင့် ဧ၀ မှ မွေးဖွါးလာသော လူသားအားလုံးကို အပြစ်၏ သား/များ အပြစ်သားများ အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သည်။ မိတ်ဆွေ သင်လိုချင်သည်ဖြစ်စေ မလိုချင်သည်ဖြစ်စေ၊ ယုံသည်ဖြစ်စေ၊ မယုံသည်ဖြစ်စေ သင့်ကို အပြစ်သားအဖြစ် ဘုရားသခင် ကသတ်မှတ်ထားသည်။ မိတ်ဆွေ အမိဝမ်းထဲတွင် သန္ဓေတည် ကတည်းကပင် အပြစ်သားဖြစ်နေပြီ။ သို့ဆိုလျှင် ထိုအပြစ်သား ဖြစ်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက် ကဘယ်လိုလဲ? ဘယ်လိုပေးဆပ် ရမှာလဲ? ရောမ ၆း၂၃ တွင်
“အပြစ်တရား၏အခကား သေခြင်းပေတည်း။ ဘုရားသခင် ပေးတော်မူသော ဆုကျေးဇူးတော်ကား၊ ငါတို့သခင် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ထာဝရအသက်ပေတည်း။”
ဟု အတိအကျ ဖော်ပြထားပေသည်။ အပြစ်သားဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေ ပေးဆပ်ရမယ့်အရာကတော့ သေချင်းတရားဖြစ်သည်။ သေချင်းတရား လို့ ဆိုတဲ့အခါ ပုပ်ပွတတ်တဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ လောကခန္ဓာကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ လောက သေချင်းရဲ့ နောက်တမလွန်ဘဝမှာ မိတ်ဆွေ ထာဝရလျှောက်လှမ်းရမယ့် ဘ၀အတွက်ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ ထာဝရ လျှောက်လှမ်းရမယ့် ခရီးမှာ ပေးဆပ်ရမယ့် အရာကတော့ သေချင်းတရားဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီကနေ့ Empty Cross၊ Empty Tomb နဲ့ Empty burial clothes တွေက သခင်ယေရှုဟာ အဲဒီအရာတွေနဲ့အတူ မရှိတော့ဘူး။ မိတ်ဆွေရဲ့ အပြစ်တရားကို ခွင့်လွတ်ဖို့၊ မိတ်ဆွေ သေချင်းကနေ ပြန်လည်ရှင်ပြန် ထမြောက်ဖို့ အတွက် သခင်ယေရှု ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီ။ ကျွန်တော်တို့ အပြစ်သား လူသားတွေအတွက် အလွန်ကြီးမြတ်ပြီး တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အပြစ်လွှတ်ခြင်းနှင့် ထာဝရရှင်သန်ခြင်းအတွက် သခင်ယေရှု ပြန်ရှင်ထမြောက်တော်မူပြီ ဆိုသော အရာများကို ပြန်လည် သတိရစေသည်၊ သက်သေများဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအတွက် ဒါထက် ကြီးမြတ်တဲ့ လက်ဆောင်၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လက်ဆောင် နဲ့ ကတိ ဘာများ ရှိပါသလဲ။ ဒါပေမယ့် သခင်ယေရှု ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့အရာ လက်ဆောင်မွန်တွေဟာ မိတ်ဆွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူသားအားလုံး အတွက် ဘယ်လောက် တန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုဒါ မိတ်ဆွေ သတိပြုမိပါရဲ့ လား၊ နားလယ်ပါရဲ့လား? တကယ်လို့ အသေအချာနားမလယ်ဘူး၊ သတိမပြုမိသေးဘူး ဆိုရင် မိတ်ဆွေရဲ့ ဘဝဟာ သူဌေးသားကလေး ဘီလ် နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်နေကြောင်း သတိပေးပါရစေ။ သူဌေးသားကလေး ဘီလ် လိုဘဲ၊ မိတ်ဆွေ ရထားတဲ့ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး လက်ဆောင်ကို မိတ်ဆွေ လွှင့်ပစ်ခဲ့မိမှန်းမသိ လွှင့်ပစ်ခဲ့မိရင်လည်း အချိန်မနှောင်းခင် အိမ်ပြန်ဖို့အတွက် မေတ္တာ များစွာနဲ့ တိုက်တွန်းခွန်အားပေးပါရစေ။
Tags: မြန်မာခရစ်ယာန်စာပေ, အီစတာ, Thawngno
Previous Celebrating Silver Anniversary of Ministry
Next Who Is Holy Spirit (Bible Study)
Archives Select Month June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 June 2019 April 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 November 2014 October 2014 September 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010